အဲ့ဒါရေယိုစိမ့်မှုပဲ၊ သိကြရဲ့လား - Myanmar Water Portal
Call for applications for the 2022 Nippon Foundation Fellowship - The United Nations
Register for Free - The 4th Global World Operators' Partnerships (WOPs) Congress
The 5Rs in Myanmar
အာကာသထိ ခြေဆန့်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ သူရဲ့ ပြည်သူတွေကို ရေကောင်းကောင်း မပေးဝေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အကြောင်း သင်ကြားဖူးပါသလား။
အဲဒီ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယ လူဦးရေ အများဆုံးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ ကြီးကျယ် ခမ်းနားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ လူတွေ၊ အစားအသောက်တွေ နဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူလူထု ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အလယ်အလတ််အဆင့်တန်းသာ ရှိတဲ့ ရေ ကို တစ်နေ့မှာ နာရီအနည်းငယ်စီသာ ရကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ရေပေးဝေရေး စနစ်ရဲ့ ပိုက်ကွန်ရက်ဟာ အတော်ဆိုးရွားတဲ့ အခြေနေမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ရေတွေဟာ အလဟဿ ဆုံးရှုံးရတယ်။ အဲ့လို ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါ ရေတွေကို အလျှင်မပြတ် ထောက်ပံ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
အဲ့ဒါ ရေယိုစိမ့်မှုပဲ၊ သိကြရဲ့လား။
ရေ အရှားပါးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံဟာ ဘာကြောင့် ရေတွေ ဆုံးရှုံးနေတာကို မထိန်းသိမ်းနိုင်သလဲ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းက မယုံနိုင်စရာ ရေရှားပါးမှုပြဿနာကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ။ ဘယ်လောက်တောင် ရေရှားသလဲဆိုရင် ပင်လယ်ရေသန့်စင်မှုကလွဲပြီး တခြားသော ရေသယံဇာတ မရှိတဲ့နိုင်ငံ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ သန့်စင်ပြီးသား ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ အဖိုးတန်ရေတွေရဲ့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းက ရေပေးဝေရေး စနစ်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ပြန်လည်ဆုံးရှုံးကုန်တယ်။ အဲ့ဒီ ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာက ပိုပြီး ဆိုးဝါးတယ်။ ကြိုကြားကြိုကြားသာ ရရှိတဲ့ ရေပေးဝေစနစ်ဟာ တရှိန်ထိုး တိုးတက်လာတဲ့ မြို့ပြတွေရဲ့ သောက်သုံးရေ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်စည်းပေးဖို့ အတော်လေး အခက်တွေ့စေခဲ့တယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အားလုံးရဲ့ အဖြေက တစ်ခုတည်း။
ဘယ်လို အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းကများ သူရဲ့ ပြည်သူလူထု တဝက်လောက်ကို ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ သောက်သုံးရေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ဆုံးရှုံးနေတာကို လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်သလဲ။
အရှေ့တောင် အာရှက အလွန်တရာမှ လှပတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ ကျွန်းပေါင်းထောင်သောင်းမက ပိုင်ဆိုင်တယ်။ မိုးများတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် ရေချိူ အလျှံအပယ် ရရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံနေ ပြည်သူလူထု တဝက်လောက်ကိုပဲ ရေပေဝေရေး စနစ်က ထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ ပြဿနာအားလုံးရဲ့ အဖြေကို သိသာထင်ရှားလွန်းပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုတလေမှ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း မရှိခဲ့ဘူး။
ရွှေတွင်းပေါ်မှာ မသိကျိူးကျွံ ပြုပြီး ဖင်ခုထိုင်နေကြသူူများ။
တကယ်လို့သာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ရေပမာဏ နဲ့ အဲ့ဒီရေ တွေကို ထုတ်လုပ်သန့်စင်ဖြန့်ဝေတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသာ တွက်ချက်ကြည့်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ပြီးတော့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေပမာဏရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကိုသာ အခုလက်ရှိ ဒါမှမဟုတ် အနာဂတ်မှာ ရေလိုအပ်နေသူတွေကို ရောင်းချပြီး ပြန်ရလာမယ့် အမြတ်အစွန်းကိုသာ မြင်တတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာရွှေတွင်းပေါ်မှာ ဖင်ခုထိုင်လျက်သားဖြစ်နေတာကို ချက်ချင်း သဘောပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ရေပေးဝေမှုအတွက် ဆောက်လုပ်ရမယ့် အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဟာ ဆယ်နှစ်ထဲ မနည်းတဲ့ ကာလမှာ အရင်းကြေပြီး အမြတ်ပါ ပြန်ရှာပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတလေမှာ အဲ့ဒီ ကာလအပိုင်းအခြားထက်တောင် ပိုနည်းနိုင်ပါသေးတယ်။
သင်သာဆိုရင် သင့်အိမ်က ရေပိုက်တွေကို ဖြစ်သလို တပ်ဆင်ထားတာ ဒါမှမဟုတ် ပြုပြင်ထားတာကို တွေ့ရင် ကြိုက်ပါ့မလား။
ပိုက်ဆက်နှင့် ပြုပြင်ရေး ပစ္စည်းပစ္စယတွေရဲ့ အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းမှု၊ အရည်အသွေး မပြည့်မီတဲ့ လုပ်သားတွေ၊ စနစ်တကျ ကြီးကြပ်မှု မရှိတာတွေ၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ အလယ်အလတ် ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီထက် နည်းပါးတဲ့ ဝင်ငွေသာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သောက်သုံးရေ ဆုံးရှှုံးမှုဖြစ်နိုင်ချေကို ပိုပြီး မြင့်မားစေတယ်။ အဆင့်မြင့် ရေပေးဝေရေး စနစ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေတောင်မှ ပိုက်ဆက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း အပိုင်းတွေမှာ တစ်ခါတရံ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတာကို တွေ့ရတယ်။ သင်ဆိုရင်ရော သင့်အိမ်မှာ အဲ့လို အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းတဲ့ပိုက်စနစ်ကို လိုချင်ပါ့မလား။ အဲ့ဒီ ချိူ့ယွင်းချက်တွေရဲ့ အကျိူးဆက်က ဘာလဲ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ သုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို အဆုံးအရှုံးခံပြီး ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုတလေ သင်တွွေ့ဖူးပါသလား။
ဆိုကြပါစို့။ အရက်ချက်စက်ရုံတစ်ခုဟာ အရက်စည်တွေထဲကို အရက်ဖြည့်ပြီးတော့ အရက်ဆိုင်ကို သွားတဲ့လမ်းမှာ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် သေချာတယ်။ သူတို့လုပ်ငန်းဟာ သက်ဆိုးရှည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ရေသန့်ဗူးသုံးဗူးမှာ တစ်ဗူးဟာ စူပါမားကတ်တွေဆီကို ပို့တဲ့လမ်းမှာ ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုပါစို့။ ရေသန့်ဗူးစျေးနှုန်းတွေဟာ ဘယ်လောက်တောင်များ ခေါင်ခိုက်နေလိမ့်မလဲ။ ဒါပေမဲ့ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ ရေပေးဝေရေး စနစ်ကတာ့ အဲ့သလိုအဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။
တကယ်လို့ သင်သာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကတည်းက IWA နဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အကြုံပြုချက်တွေကို နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီ blog ကိုဖတ်နေရပါ့မလား။
သင် မဖတ်ရဖို့ ပိုများပါတယ်။သင်ဟာ ယိုစိမ့်မှုရဲ့ ဆိုးကျိူးကို နားလည်ပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့လိမ့်မယ်။ အဖိုးတန်ရေသယံဇာတကို ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ပြီး ဘဏ္ဌာရေးအရလည်း အကျိူးရှိအောင် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်ရဲ့ ရေပေးဝေရေး စနစ်ကလည်း အတော် ခရီးရောက်နေလောက်ပြီ။
Translated by Moe Zatt
Source Link: International Water Association (IWA): It's the leakage, stupid!
Govt announces ‘project bank’ to get Myanmar build...
Drinking water plants inspected in Yangon
Course Clips - Water Politics & Governance